बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक – Maitri News
maitrinews November 18, 2020
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुरु भएको आजको बैठक यसअघि गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकको नियमित बैठक हो । बैठकमा दुबै अध्यक्षको उपस्थिति छ ।
प्रधानमन्त्रीको सञ्चा विज्ञ रामशरण बजगाईका अनुसार बैठक निर्धारित समय १ बजे नै शुरु भएको छ । बैठकमा सचिवालयका सबै सदस्यहरुको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो । गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ पृष्ठको लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । नेकपा सचिवालयमा नौ जना सदस्य रहनुभएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्डले लेख्नुभएको छुट्टाछुट्टै पत्र पनि सचिवालयका सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो । आजको बैठकमा सोही विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । त्यसको अतिरिक्त कोभिड १९ ले पारेको समस्या र समाधानका विषयमा पनि छलफल हुने सचिवालयका सदस्यहरुले बताउनुभएको छ ।
Previous Previous post: कमरेडहरु ! जबजको रक्षक बन्ने कि, पचण्डपथको पिछलग्गु ?
Next Next post: झुठो अभियोग र लाञ्छना सहन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, उचित जवाफ दिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली